U baratanka Zero Net
$3 Billion Endowment Waxay helaysaa ka sii nadiifin iyo cagaar
Soo saaraha baska korantada ee Proterra ayaa ka mid ah maalgelinta saamaynta badan ee McKnight Foundation. credit Video: Proterra
Qeybtan ayaa markii hore ka soo muuqatay Isku-dubarid Deeq-waxbarasho waxaana dib loogu daabacay halkan oggolaansho buuxda.
Markii Hurricane Ida ay ku dhufatay koonfurta Louisiana, bulshooyinka ay sida aadka ah u garaacday duufaantu waxay ka tageen koronto la'aan - qaboojiye, marawaxado, talaajado, nalal, ama qalab naf badbaadin ah. Shirkadda New Orleans Solar Company PosiGen ayaa soo gashay la geeyo 12 saldhig oo ku shaqeeya cadceedda la-hawlgalayaashooda oo jooga goobaha saadka musiibada, xarumaha bulshada, xarumaha dab-damiska, iyo kaniisadaha aagga si ay u taageeraan dadka deegaanka. Haddii ay tahay PosiGen-ka-fikirka hore, macaamiishooda dakhligoodu hooseeyo ee qoraxda kuma jiri doonaan mugdi marka masiibada cimiladu dhacdo - waxay sidoo kale ka shaqeynayaan inay ku rakibaan 300 baytari ku shaqeeya qoraxda guryaha aagga.
Saamaynta ba'an ee isbeddelka cimilada - laga bilaabo duufaannada iyo daadadka ilaa abaarta iyo dabka - ayaa calaamad u ah meeraha cas. Taasi waa sababta McKnight uu u maalgelinayay shirkadaha sida PosiGen muddo sanado ah, annagoo waafajinayna deeqdayada iyo hadafkayaga ah inaan dhimno qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyadoo la raacayo xawaaraha iyo baaxadda ay dalbato dhibaatada cimiladu.
PosiGen iyo Mashruuca Footprint waxay daabulayaan tamarta cadceeda Hurricane Ida Dhibanayaasha Louisiana. credit Photo: Footprint Project
Laakin maalgelinta mustaqbal waara uma baahna in ay ku timaado kharashka waxqabadka maaliyadeed. "Waxaan aragnay sida geesinimada leh, maalgashiga heerka suuqa ee xalalka cimiladu ay u kicisay hal-abuurnimo, u kobcinay deeqdeena, oo ay noo ogolaatay inaan kordhino deeq-bixintayada," ayuu yiri Ted Staryk, oo ah xubin guddiga McKnight muddo dheer iyo guddoomiyaha Guddiga Maalgelinta Hawlgalka.
"Waxaan aragnay sida geesinimada leh, maalgashiga heerka suuqa ee xalalka cimiladu ay u kicisay hal-abuurnimo, u kobcisay deeqaheena, oo noo ogolaatay inaan kordhino deeq-bixintayada."
-TED STARYK, XUBIN GUDDIGA
Laba ka mid ah maalgashiyada caanka ah ee McKnight waxay la socdaan Mellon iyo Generation.
Iyadoo $100 milyan oo maalgashi lagu sameeyay 2014, McKnight wuxuu iskaashi la sameeyay Mellon si uu u abuuro balaadhan Istaraatijiyadda Wax-qabadka Carbon maalgelinta dollarkeena u janjeerta shirkado waxtar badan leh. Iyada oo ku saabsan 1,000 hanti, fundku wuxuu yareeyaa xoojinta kaarboonka maalgashigayaga 50% marka la barbar dhigo bar-tilmaameedka, dhammaan iyada oo ka sarreysa heerka dhaqaale ahaan. Guul-guulaysi
Bixinta soo celinta xitaa ka sii weyn, Generation's Sanduuqa Sumaanta Sameeya waa sanduuqa sinnaanta ee ugu wanaagsan ee ku jira deeqda McKnight, taasoo kicinaysa aasaaska si loo kordhiyo maalgelinteena bilowga ah ee 2014 ee $25M by $50M ee 2017 iyo mar kale 2018. Sanduuqa wuxuu sahamiyaa fursadaha dhaqaale ee ka soo baxa meeraha cadaadiska, ka faa'iideysiga isbeddellada sida kobaca magaalooyinka, biyo yarida, iyo lama huraanka ah in la joojiyo isbedelka cimilada. Waxay tilmaamaysaa shirkado si wanaagsan loo maareeyay, oo si fiican loo qiimeeyay kuwaas oo horumari doona mustaqbalka fog. Tani waxa ay ahayd maareeyihii ugu horeeyay ee “saamayn” McKnight si uu ugu qalin jabiyo qoondaynta buuxda ee deeqda.
McKnight wuxuu maalgeliyaa Partner Community Capital, kaas oo maalgeliya ganacsiyada yaryar ee ilaaliya kheyraadka dabiiciga ah ee Appalachia. Xuquuqda sawirka: FLS Energy
Aasaaska gaarka ah ee Maraykanka ayaa sharcigu farayaa in ay ku bixiyaan ugu yaraan 5% ee deeqdooda sanad walba. In kasta oo aasaasayaashu sida caadiga ah u adeegsadaan doollarka deeqda si ay u taageeraan xalka cimilada, 95% ee hadiyaddu had iyo jeer waa mid aan la daboolin - fursad la seegay si loo maalgashado isbeddelka.
Arrinka McKnight, in ka badan 40% oo ka mid ah $3 bilyan oo deeq ah ayaa leh xoogaa isku toosan oo hadaf ah, iyo maalgashiga saamaynta ururka ma xidhna, iyadoo $500 milyan ay ka go'an tahay maalgashiga saamaynta guud iyo kuwa gaarka ah ee bixiya fikradaha, tignoolajiyada, software, iyo adeegyada si dhaqaalaha looga saaro.
Kordhinta rikoodhkan khibradda leh, Oktoobar 2021, McKnight Foundation waxaa ka go'an in la gaaro eber saafi ah Gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo ee $3 bilyan deeqdiisa marka la gaaro 2050 ugu dambeyntii. McKnight waa aasaaska gaarka ah ee ugu weyn dalka si uu u daba galo deeqaha eber saafiga ah.
Ku dhawaaqidani waxay ku soo beegantay xilli dadka aduunka oo dhan ay la kulmaayaan gacmahooda ugu horeeya ee saamaynta xun ee isbedelka cimilada iyo saynisyahannadu waxay isku raaceen inay tahay inaan qaadno tillaabo lama filaan ah si loo xaddido kulaylka caalamiga ah 1.5°C marka la gaadho 2050. Habka McKnight ee ah in meesha laga saaro saamaynta qiiqa hawada ee guud ahaan. faylalkayaga macneheedu waxa weeye in aanu ka shaqaynayno inta ugu badan ee kheyraadkayaga dadaalka ah si looga fogaado saamaynta ugu xun ee isbedelka cimilada.
Sannadka 2019, faylalka McKnight's ayaa soo saaray 1,869,495 MW oo tamar la cusboonaysiin karo. Xuquuqda sawirka: Shutterstock/Oleksii Sidorov
eber saafiga ah waa istiraatiijiyad dhamaystiran si loo yareeyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhammaan faylalka maalgashiga - oo ay ku jiraan qaybta shidaalka -iyado samaynta maalgashi cusub si loo dhiso dhaqaale aan kaarboon lahayn. Habkan adagi waxa uu u baahan yahay in la baaro gees kasta oo ka mid ah deeqaha qiiqa qiiqa ah, joojinta maalgashiga soo-saareyaasha sare, sida maalgelinta shidaalka fosilka ee hadhay, la shaqaynta inka badan 75 maareeyayaasha maalgelinta si ay u nadiifiyaan hantidooda, iyo in aan si joogto ah ula xiriirno horumarkayaga.
" eber saafi ah waa istaraatijiyad dhamaystiran oo lagu dhimayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee dhammaan faylalka maalgashiga - oo ay ku jiraan qaybta shidaalka - iyada oo sidoo kale samaynaysa maalgashi cusub si loo dhiso dhaqaale ka madax banaan kaarboon."
—ELIZABETH MCGEVERAN, AGAASIMAHA MAALGASHIGA
2015, McKnight wuxuu ka mid ahaa boqolaal maalgashadayaal ah oo ku baaqayay heshiis hami leh oo hogaaminaya ilaa COP21 ee Paris. Tan iyo markaas McKnight wuxuu si ballaaran u ballaariyay maalgashigiisa saameynta wuxuuna labanlaabay deeq-bixintiisa la xiriirta cimilada. Eber saafiga ah ayaa weli ah daqiiqad kale oo ay Aasaaska ku hogaamiso tusaale-iyo in aan wadaagno waaya-aragnimadeena.
Iyadoo COP26 uu ka socdo Glasgow, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maalgashadayaasha hay'adaha inay nagu soo biiraan si geesinimo leh si aan ula kulanno xilligan muhiimka ah ee isbeddelka cimilada. Cilmigu wuu cad yahay dhaqaalaha ay tahay in aan abuurno si aan u horumarno, dollar kasta oo deeq ah waxa uu bixiyaa fursado degdeg ah oo awood leh si loo horumariyo mustaqbalka kaarboon-yar.
Mawduuca: Maalgashiga Saameynta
Machadka McKnight wuxuu u ballan qaadayaa Net Zero Guud ahaan $3 Bilyan oo Bixinta
Jawaabaha Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Awoodaha Net Zero
Astaamaha Elizabeth McGeveran Noofambar 2021